Design Analysis - China manokana Metal Group Limited
Ilaina ny tain-drendrika Design vilany
Tain-drendrika vilany FEA famakafakana
Lovia kely Matte FEA famakafakana
Ny endriky ny tain-drendrika vilany dia miankina voalohany indrindra amin'ny ny fepetra miasa dia tsy maintsy hanohitra. Noho izany, ny famolavolana manaraka fepetra tsy maintsy ho raisina ho fandinihana:
Karazana lafaoro lehibe fa ny tain-drendrika dia ho vilany Service,
Habetsahana sy ny karazana Niteraka tain-drendrika,
Method ny mizara tsara sy fanariana ny vilany,
Heat fiantraikany nandritra ny fandidiana,
Amin'ny lafiny faneriterena,
Fomba fikojakojana vilany
Ilaina Parts for the handling of the pot.
raha kely indrindra 2 trunnions mba haka azy io, ary hanosika azy na aiza na aiza izany no tokony ho ilaina,
ny tavin-drano mba hametraka izany teo tao amin'ny tany
ny rafitra mba hiatrehana ny vilany iray mitondra lovia kely, izany hoe mampiasa izany rafitra, ny vilany dia azo tipped tain-drendrika ny hanidina an-idina ho tain-drendrika lavaka ho an'ny fanodinana,
tilting iray, fara fahakeliny, na ny tendron'ny ravin Lug ny vilany iray feno vano na mba hampody ny vilany foana ao amin'ny toerana mety tsara ho an'ny hihena midina na ny fanamboarana.
Tain-drendrika vilany amin'ny faritra rehetra ilaina amin'ny fikarakarana ny dia tsy maintsy natao mba hihaona tena ilaina manaraka ireto:
Ny fanitarana mafana noho ny hafanana entana mandritra ny fandidiana tokony ho fanamiana manerana ny circumference ny tain-drendrika vilany vatana ary tokony ho voasakana tahaka ny vitsy araka izay azo atao ny ara-nofo sy ny taolan-tehezana accumulations niteraka fizarana faritra ny hatevin'ny rindrina tetezamita.
Toy izany koa ny fanamiana Contraction dia tokony ho natao avy amin'ny steered hihena rehefa avy fanariana.
Noho izany, dia misy fitsipi-ankihibe amin'ny fampivelarana tain-drendrika vilany teti-dratsy:
Ny ambany ny vilany tsy tokony ho eo amin'ny fifandraisana mivantana tamin'ny tany, fa ny sasany tany fangatahany fahazoan-dalana dia tokony ho mialoha.
Araka ny taolan-tehezana vitsy araka izay azo atao no tokony hapetraka teny ivelan'ny vilany ny tain-drendrika.
Ireo rehetra ireo fepetra toy ny mikendry tsara, na stiffness fahamarinan-toerana araka izay azo atao mba hisorohana tafahoatra deformation aloha loatra sy hiarovana ny fiainana tsara indrindra tantaran 'ny tain-drendrika vilany.